Xiddigii Garoonka, Rikoodhadii Ciyaarta Iyo Xaqiiqooyinka Kulankii Chelsea Ku Garaacday Fulham - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddigii Garoonka, Rikoodhadii Ciyaarta Iyo Xaqiiqooyinka Kulankii Chelsea Ku Garaacday Fulham
Xiddigii Garoonka, Rikoodhadii Ciyaarta Iyo Xaqiiqooyinka Kulankii Chelsea Ku Garaacday Fulham
Laba gool oo Kai Havertz uu u dhaliyey ayaa Chelsea ka caawiyey in ay 2-0 ku garaacaan Fulham oo marti ugu ahayd garoonka Stamford Bridge.
Laacibka reer Germany ayaa lugtiisa bidix ku dhamaystay laba kubbadood daqiiqadihii 10aad iyo 49aad ee labada qaybood ee kulanka, iyadoo laba baas oo qurux badnaa uu ka kala helay Mason Mount iyo Timo Werner.
Chelsea ayay guushani siisay in ay lix dhibcood ka sare marto kooxda kaalinta shanaad fadhida ee West Ham United, halka Liverpool ay toddoba dhibcood ka sarreeyaan xilli afar kulan oo kali ahi uga hadhsan yahay dhamaadka xilli ciyaareedka.
Xaqiiqooyinkii kulanka iyo labada kooxood
Chelsea lagama badinin dhamaan 19kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee garoonkeeda ay kula ciyaartay Fulham, waxaanay guuleysatay 11 iyo siddeed ay barbarro la gashay. Fulham oo ku guuleysta Stamford Bridge waxa ugu dambaysay sannadkii 1979kii.
Dhamaan siddeedda gool ee Kai Havertz uu u dhaliyey Chelsea waxay uu ku dhaliyey magaalada London. Toddoba ayuu Stamford Bridge ku dhaliyey, midna Selhurst Park ayuu ku dhaliyey.
Fulham ayaa guulo la’aan ahayd 24kii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee ay la ciyaartay kooxaha reer London. 19 ayaa laga badiyey, shanta kalena barbarro ayay galeen.
Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa shabaqiisa ilaashaday 11 ka mid ah 15 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah oo uu hoggaamiyey Blues. Waxa uu sidaa ku noqday tababarihii ugu horreeyey taariikhda horyaalka ee 15ka kulan ee ugu horreeya 11 ka mid ah aan goolal laga dhalin.
Mason Mount ayaa shan gool dhaliyey laba kalena caawiyey iyo Timo Werner oo laba dhaliyey shanna caawiyey ayaa goolasha ugu badan ee Chelsea ku lug yeeshay intii uu Thomas Tuchel tababaraha u ahaa Blues.
Kai Havertz ayaa noqday xiddigii ugu fiicnaa garoonka kaddib labada gool ee uu dhaliyey iyo in uu ahaa khatarta ugu weyn ee ay waajahaysay Fulham. Waxa ay isku qiimayn ahaayeen Mason Mount oo ay min 8 ka heleen darajada qiimaynta ciyaarta, laakiin Havertz ayaa xiddiga garoonka la guddoonsiiyey.
Beddelka: Abraham (5), Kante (5), Alonso (n/a).
Beddelka: Mitrovic (n/a), Onomah (5), Carvalho (5).